"Waa Habeenkii Iigu Xumaa Ee Aan Garoon Ku Noolaado, 20 Daqiiqo Kaddib....." - Xabi Alonso Oo Sheegay Habeenkii Uu Kubadda Cagta Nacay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha Maanta“Waa Habeenkii Iigu Xumaa Ee Aan Garoon Ku Noolaado, 20 Daqiiqo Kaddib…..” – Xabi Alonso Oo Sheegay Habeenkii Uu Kubadda Cagta Nacay
“Waa Habeenkii Iigu Xumaa Ee Aan Garoon Ku Noolaado, 20 Daqiiqo Kaddib…..” – Xabi Alonso Oo Sheegay Habeenkii Uu Kubadda Cagta Nacay
Halyeeyga kubadda cagta Spain ee Xabi Alonso ayaa ahaa mid UEFA Champions League kula soo guuleystay Real Madrid isla markaana wakhtiyo badan oo farxadeed kusoo mareen kooxdaas balse sheegay habeenkii ugu adkaa xirfadiisa ee uu isla kooxdaas kusoo qaatay.
Alonso ayaa shan sano kusoo qaatay gegida Estadio Santiago Bernabeu isaga oo kusoo guuleystay horyaalka La Liga 2012, laba Copa Del Rey soo hantay mudadaas sidoo kalena Champions League 2014 soo qaaday.
Xabi Alonso ayaa sheegay in habeenka mugdiga ku lahaa ee soo maray uu ahaa markii ay Barcelona guuldarro 5-0 ah kagala soo kulmeen gegida Camp Nou sanadkii 2010.
Xavi Hernandez iyo Pedro Rodriguez ayaa Barcelona hoggaan 2-0 ah siiyay kaddib kaliya 17 daqiiqo oo ay ciyaartu socotay, kahor inta uusan laba gool raacsan David Villa oo uusan goolka shanaadna kusoo khatimin Jeffren.
Alonso oo ka hadlayay barnaamijka uu daadihiyo halyeeyga Liverpool ay usoo wada ciyaareen ee Jamie Carragher ayaa sheegay inay ogaayeen in haddii ay kuwo fiican oo edeb leh garoonka ku dhex ahaadaan ay Barcelona dilayso iyaga isla markaana uu doonayay inuu iskaga tago garoonka kaddib kaliya 20 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay.
“Wakhtigaas waanu ogayn haddii aanu aad u fiicanahay inay na dili doonaan” ayuu ugu horreynba hadalkiisa ku bilaabay Xabi oo Carragher u warramayay.
“Kulankii horyaalka ee Camp Nou 5-0 ayaanu ku guuldarraysanay taasina waxa ay ahayd habeenkii ugu xumayd ee aan garoon ku noolaado, 20 daqiiqo kaddib waxaan doonayay inaan tago, inaan guriga tago, inaan maydho kaddib guriga tago”
“Waxay ahayd mid aad u xanuun badan, ka go’naansho weyn ayuu na siiyay, maanu noqon karayn kuwo aad u wanaagsan haddii kale kamaanu adkaaneen (Xilli ciyaareedkii xigay)”